Rosia: Politika Sy Fanakona-masoandro Tao Samara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2018 5:33 GMT
Ny 1 Aogositra 2008, andron'ny fanakonana tanteraka ny masoandro, tao an-tananàn'i Samara i Oleg Klimov, ilay Rosiana mpaka sary fanao an-gazety mba hihaona amin'ireo solontenan'ny mpanohitra eo an-toerana. Tao anaty blaoginy, nofaritany (teny rosiana) ny tranga iray tsy fahita firy mikasika ny politika sy ny haikintana rosiana:
[Azafady tsindrio eto hijerena ireo sary efatra nataon'i Oleg Klimov sy tafiditra ao anatin'ilay lahatsoratra.]
Nitranga tao Samara ny fanakona-masoandro raha vao vita ny fivorianay niaraka tamin'ny [ireo mpikambana] mpanohitra (somary maromaro ihany) teo an-toerana. Nilazana mialoha izahay, ary vokatr'izay dia nasiana “rambo” nanaraka anay. Ny fotoana farany niainako sahala amin'io, dia fony [tany Ozbekistana] tamin'ny taona 1992, ary, sady izao koa, tena nandritra ny fotoana namoretana ny mpanohitra. Tamin'izany fotoana izany, samy nambaran'ny Minisiteran'ny Raharahambahiny an'ny Repoblikan'i Ozbekistana ho olona tsy iriana izaho sy ilay Holandey mpanao gazety, noho ireo fahasam,ihafàna nisy teo amin'ny “fandaharam-potoana” nandritra ny fitsidihanay. Mbola olana goavana ho an'ny gazety [holandey] izay iasàko ny fahazoana taratasy fitsidihana ‘visas’ ao amin'io firenena io, demokratika amin'ny fombany.
Mbola ratsy lavitra noho ny tany Ozbekistana ilay “rambo”-nay, tao Samara. Raha vao hitany aho naka sary lehilahy antitra iray marefo nitondra sary fitsirihana (natao tamin'ny ranjony vaky taolana), tsy niahotra akory ilay “rambo” nisalovana ahy, mialohan'ny nilazany fa dokotera izy, avy eo koa iraka avy amin'ny filaminam-bahoaka. Natosiny aho, nampangainy ho nanelingelina an'ilay lahiantitra aho ka tsy nahafahany nandeha malalaka manaraka ny morondranon'i Volga… Tsy fantatr'ilay rambo” fa manaraka ny fanakona-masoandro fotsiny izahay (amin'ny alàlan'ilay sary fitsirihana), raha toa atelin'ilay volana tsikelikely ilay izy ary miroso hatrany hatrany, ary na dia mbola tsy maizina tanteraka aza, dia efa misy fikorontanan-tsaina kely sahady. Nijanona tsy nanidina intsony ireo vorona, ary ilay “rambo” irery sisa no minaonaona sahala amin'ny sahona, amin'ny alalan'ny fitakiana amiko mba hampisahatra ny fakàko sary an'ilay lahiantitra sy hampiseho aminy ireo antontan-taratasy hahafahako maka ny sarin'ireo olona eny an-dalambe. Adala.
Dia izao no tena navaliko azy: “Tsy voatery ho olona nahazo fahalalàna ianao. Jereo avy amin'ilay sary fitsirihana ny ranjo vakin”ny lahiantitra ny masoandro ary ho hitanao ny fomba fangalaran'i Poutine ‘oligarque’ [tsékista] ny masoandrontsika. Tena gaga izy nahita fa tsy ao ny antsasaky ny masoandro. (Teo amin'ny sary faharoa, teo amin'ny ankavia no nisy azy, nijery raha toa ka tao ny masoandro ;)). Tsy hitsahatra mihitsy ny ho gaga aho amin'ny hadalan'ny rafi-pitondrana sy ireo izay manompo azy. Raha mbola variana nijery ny fanakona-masoandro teo ilay “rambo”, izahay efa nihataka lavitra ary tampoka teo, “rambo” hafa indray no efa indro nanaraka anay, saingy tsy noraharahianay. Iza ireo? – Tsy haiko – ny mpitandro ny filaminana, ny FSB (Sampan-draharaha Federaly misahana ny Fiarovana ao Rosia), Nashi, hetsika iray an'ireo tanora mpomba an'i Kremlin, (Vashi, izay miady rima tsara amin'ny Nashi, dia midika hoe ‘ny azy’ fa ny Nashi dia midika hoe ‘ny anay’). Matesa faty any daholo izy rehetra.